Krim asparagus maintso - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Krimaso asparagus maintso
menaka40 minitraOlona 4
Mbola tsy nanandrana crème asparagus manan-karena toy izany aho! Manana firafitra tena izy tsara sy mamy miaraka amin'izay fa tsy mamono mihitsy. Ankoatry ny, asperza Izy ireo dia mety amin'ny sakafom-pisakafoanana satria diuretic be izy ireo.
Betsaka aminareo no hanontany tena hoe maivana izany raha misy crème amin'ny haingon-tsary. Eny, maivana izany satria mampiasa crème de crème médre Puleva izay manana matavy 5% fotsiny isika, tsy toy ny ambin'ny menaka fanosotra manana 15 ka hatramin'ny 18%. Zava-dehibe izany aza mamafa ity akora ity, satria manampy ny hakitroky ny crème izy io ary miaraka amin'izay dia manalefaka ilay tsiro mahery azo avy amin'ny asparagus.
Sambany aho nanandrana ity fomba fahandro ity tamin'ny hazavana manokana Thermomix® ary tiako izany. Niaraka tamiko ny rahavaviko izay, na dia tsy nandefitra laktose aza, dia mahazo aina kokoa isan'andro rehefa manaraka sakafo tsy misy ronono. Nisy fotoana nanontaniany raha azo soloina ilay crème mba hisorohana lactose nefa tsy very ilay crème desiment? Ary teo no nahitanay fa misy menaka legioma, izany aza misy lactose ho an'ny tsy fandeferana na vegan.
Te hanararaotra manomboka eto ka hatramin'ny Misaotra anao ho an'i Beatriz, de las Rozas, noho ny hatsaram-pony tamin'ny famahana ny fisalasalantsika sy ny fahalianany amin'ny bilaogy.
1 Krimaso asparagus maintso
Mamy, matsiro, maivana. Toy izany koa ity crème ity.
Fotoana manontolo: 40M
Fehezam-boninkazo maintso 2
Menaka oliva 30 g
Tongolo antonony 1 (150 g eo ho eo.)
Zucchini 1, voahidy ary voatetika (350 g eo ho eo.)
Sira 1 pinch
Dipoavatra mainty 1 pinch
175 g ny fanosotra maivana na fanosotra mahandro
Apetrakay ao anaty vera sy programa ilay menaka 3 minitra, maripana varoma, hafainganana 1.
Mandritra izany fotoana izany dia manasa ny asparagus isika ary manala ny tapany mafy amin'ilay tsorokazo. Nozarainay roa ka hatramin'ny 2 na 3 ary notahirizinay tsirairay ny yolks.
Arotsaho ny ahitra asparagus ary atono azy ireo 2 minitra, maripana varoma, mifanohitra amin'ny famantaranandro, hafainganan'ny sotro. Vonoina izahay, rehefa esorina, tsy esorinay ny menaka ary hotehirizinay.
Ampio ny tongolo amin'ny vera dia tetehina 4 segondra, hafainganam-pandeha 4 ary avy eo manendasa 4 minitra, maripana varoma, hafainganana 1.
Avy eo dia apetrakay ao anaty vera sy programa ilay zucchini sy asparagus 4 segondra, hafainganam-pandeha 4.
Avy eo dia poach mandritra 2 minitra, maripana varoma, hafainganana 1.
Ampio ny ron-kena, sira sy dipoavatra ary programa 25 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 1.
Ampio ny crème maivana amin'ny Puleva (mitahiry sotro roa haingon-trano) sy programa 1 minitra, 90º, hafainganam-pandeha 4.
Miandry minitra vitsivitsy isika mba hidina kely ny mari-pana dia potehintsika 2 minitra, hafainganam-pandeha 5-10.
Arosoy ny crème mafana ary haingo miaraka amin'ny tendrony asparagus voatokana sy ny nilatsaka vitsivitsy an'ny krète maivana Puleva.
Fanazavana fanampiny - Asparagus dia
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Celiac, Tsotra, fitondrana, Lasopy sy menaka, tsy mihinan-kena
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » Lasopy sy menaka » Krimaso asparagus maintso
50 hevitra, avelao ny anao
thermo dia hoy izy:
Ny asparagus maintso ary tsy mifanaraka tsara aho, tsy voamarikao ve ny tsiro mahery izay ananan'izy ireo be loatra?
Satria ny firafitra dia tsara amin'ny fiteny hebreo.
Valiny amin'ny thermo
Andramo, tianay izy io, maivana be ary ny tsiro mahery an'ny asparagus dia zara raha tsikaritra. Ny vadiko dia tsy avy amin'ny asparagus dia ary hitany fa matsiro izany.
Raha tokony ho io crème io dia afaka mampiasa oroka mirehitra tonga lafatra ianao ?? oroka
Safidy hafa io, izay afaka manampy fikitika mahafinaritra ihany koa. Andramo ary lazao anay ny fomba.
Tsara tarehy izany, Silvia! Etsy an-danin'izany, fananako io, sa amin'ity taona ity dia lafo be ny asparagus dia ??
Manu, tsy anao io, lafo be ry zareo fa tiako izy ireo ary mivoaka tsara ity crème ity. Tsy manohitra ny tsy anaovako azy aho, azafady.
Misaotra indrindra amin'ny fanoloran-tenanao. Fomba fahandro sy fampisehoana mahafinaritra koa. Amin'ny maha-zazavavikely ahy dia handeha tsikelikely aho fa azoko antoka fa hahafinaritra ahy ny mampiasa ny thermomix sy ny fahalalanao.
Misaotra betsaka amin'ny teninao, hanohy hametraka fomba fahandro tsotra izay manampy anay rehetra izahay.
Lucia Garcia Solis dia hoy izy:
mirary alina, faly aminao sy ny fomba fahandro anao aho. Manana thermomix aho herintaona mahery fa ny teknolojia vaovao tsy dia miaraka amiko fa isan'andro miditra ny pejinao aho ary mandika haingana ireo resipeo, amin'izao fotoana izao dia nanao loin tamin'ny saosy Pedro Ximenes ary tsara ny pint. Misaotra betsaka.
Mamaly an'i lucia garcia solis
Faly be aho fa tianao ny resinay. Hilaza aminay ianao hoe nanao ahoana ny tenderloin niaraka tamin'ny saosy, tianay izany.
Ilay tantara ratsy, avy any Villamanrique (Seville) aho ary ankalazaintsika anio ny Andalusia ary efa niarahaba ahy izy ireo, ary nataoko ihany koa ny tuna empanada ary mahafinaritra. misaotra anao mamaly oroka ahy
m. Carmen dia hoy izy:
Misaotra betsaka noho ny resinao. Tiako izy io. Mikasa ny hanao an'ity crème asparagus ity aho, tsy haiko hoe maninona aho no afaka manolo ny crème amin'ny fanesorana kaloria.
Valio aho. Carmen
M. Carmen, maivana ity crème ity, ny crème anananao dia vaovao iray manana tavy 5%, kely dia kely ary manome azy filàna mety. Andramo ary lazao ahy ny hevitrao.
FLORI dia hoy izy:
Izaho koa dia tao anatin'ity hazavana maivana ity ary toa nahafinaritra, nanaitra ahy ny crème asparagus, fa ny nahavariana ahy ihany koa dia ny bitro niaraka tamin'ny zava-maniry tsara, raha ny marina dia nanao an'ity maraina ity aho hisakafo atoandro ary nahafinaritra… miarahaba.
Valiny amin'i FLORI
Ireo fampianarana ireo dia fahafinaretana, ankoatry ny fahitana ny famelabelarana azy, dia nanandrana izany izahay ary eo anelanelantsika rehetra dia hevitra vaovao no nozaraina.
MANKASITRAKA NY RESIPA TSARA SOA ARY MBOLA MISAOTRA
Valiny amin'ny angeline
Faly aho fa tianao ny fomba fahandro an'ny Angelines. Misaotra anao nanaraka anay. Mirary ny soa indrindra
Ao amin'ny bilaoginao aho!… Tena nofinofy izany !! 😉
Araka ny nolazaiko anao rehefa nihaona izahay dia iray amin'ireo mpankafy anao lehibe indrindra. Tena faly aho fa nanampy ahy.
Mahafinaritra ity crème ity. Tsy hitan'ny zanako lahy akory ilay asparagus ary rehefa nanao an'ity recette ity aho dia voatery namitaka azy aho tamin'ny filazako azy fa zucchini izy mba hahafahany manandrana… Nony farany dia nihinana lovia roa izy!
Tiako ny bilaoginao!
Misaotra Bea, noho ny fandraisanao anjara lehibe ary amin'ny maha mpanaraka mahatoky anao. Faly aho fa tianao ny resinay ary amporisihina ianao hanandrana zava-baovao miaraka amin'izy ireo.
Oroka lehibe ary antenaiko fa hihaona aminao amin'ny fampianarana mihoatra ny iray. Fahafinaretana izany!
MARI CARMEN VAQUERO dia hoy izy:
Tsy tiako ny asparagus, maintso tsara hoy izy ireo. Tsy nanao koa ny colabacin fa nataoko ny crèmeo-nao ary tena tsara ity ka ho sahy hiady amin'ilay asparagus aho satria toa pint izany …… Holazaiko anao izany.
Valio amin'i MARI CARMEN VAQUERO
Azoko antoka fa tianao izany satria efa nanandrana azy imbetsaka tamin'ny olona zara raha maintso toa anao aho ary tian'izy ireo izany. Lazao aminay.
Ny tendron'ny asparagus tazominao ho haingon-trano, azoko ampidirina amin'ny crème koa ve mba haharitra kokoa ???
Misaotra betsaka anao amin'ny resipeo.
Mamen dia hoy izy:
Tiako ny resinao rehetra !!! .. tsara ianao, fantatro fa mifamatotra aminao aho, isaky ny mahazo mailaka avy aminao aho, dia misy fifaliana miditra amin'ny vatako izay tsy azonao an-tsaina. Tena mpahandro aho ary ny marina dia ireo resipeo rehetra nalefanao, vitsy dia vitsy ny azoko atao.
Misaotra tamin'ny asanao.
Mamaly an'i Mamen
Salama Silvia, tiako ilay hevitra, manana lovia asparagus ao anaty vata fampangatsiahana aho izay miteny amiko hoe “esory aho hiala eto yaaaa !!
Ary efa azo antoka miaraka amin'ity fomba fahandro ity, satria tsy afaka mahita akora ao Miami aho ary crème legioma amin'ity indray mitoraka ity, inona koa no apetrako fa maivana?
Ronono nesorina ??, matavy ambany etona? Tsy afaka mieritreritra zavatra hafa efa hitako tato aho, mitovy ve ny habeny?
Raha ny fanazavana, ny herinandro lasa teo dia nataoko zava-maniry tsara ilay bitro (avy any Sina) ary mamy ilay izy, narahako azy niaraka tamin'ny mofo tao Pyrex ary nokaoka ny vadiko ary nandena azy.
Misaotra noho ny resinao !!
Valiny amin'i SUSANA
charo dia hoy izy:
Salama Silvia, ohatrinona ny habetsaky ny asparagus? Misaotra tamin'ny resipeo, arahaba
Mamaly an'i charo
Charo, amin'izao fotoana izao dia tsy manana fehezam-boninkazo ao an-trano aho hahitako ny grama fa mieritreritra aho fa 400 gr ny isam-bondrona, izany hoe 800gr eo ho eo na kely aza ho an'ny fomba fahandro.
marisa dia hoy izy:
Salama Silvia, azoko tsara fa afaka manamboatra crème letisia koa ianao, azafady apetrakao ve ny resipeo, raha fantatrao izany, tiako ny anao, misaotra betsaka. Oroka.
Mamaly an'i marisa
Marisa, mbola tsy nanao an'io aho fa hitako ny recette ho anao. Napetrako ho anao ny rohy.
Rita dia hoy izy:
Tiako ireo resipeo rehetra andramako, tena tsara izy ireo saingy azo atao menaka kely kokoa, ho tsara toy izany koa
Mamaly an'i Rita
Amin'ny resipeo maro dia mazàna aho mampihena kely ny solika ary tena tsara izy ireo. Andramo izany.
Silvia, misaotra betsaka anao, fa namaly ahy haingana dia haingana ianao, tsara ianao, rahampitso no hataoko, satria nividy letisia betsaka amidy aho, ary tianay be izany, ary tsy tadidiko ny fomba nanaovako azy, Hoy aho, misaotra betsaka, oroka.
Hilaza aminay ianao hoe nanao ahoana izany ho anao.
Vitako io "faran'ny herinandro" io ary nahitam-pahombiazana ... toy ny zavatra rehetra ataoko amin'ny tranokalanao.
arahabaina ary aza mitsahatra !!!
Pepi, ao an-trano ity fanosotra ity dia lasa iray amin'ny ankafizinay ary ny vadiko dia tsy vita amin'ny asparagus. Mirary ny soa indrindra
Nataoko ho an'ny rahampitso, tsy nisy crème io ary 4quesitos no nampiasaiko. Tsara be !!!
Fahafinaretana mamy! Matsiro. Efa nomaniko hohaniko rahampitso.
Androany no nanaovako ity crème matsiro ity, ary ny marina dia tena tianay izany, na dia tsikaritro kely aza ny mandan'ny asparagus, dia angamba noho ny nahenako ny haben'ny ron-kena hanaovana azy matevina? Na hatramin'ny zaza.
marusa dia hoy izy:
misy menaka soja organika sy oats. Manokana, ny soja avy amin'ny provamel (santiveri) dia mahatalanjona. Ataovy ao an-tsaina fa ny soja dia iray amin'ireo sakafo transgenika mahazatra indrindra ka ny marika "organika" dia zava-dehibe. Amidin'izy ireo ao amin'ny supermarket an'ny fitsarana anglisy
Mamaly an'i marusa
Salama Silvia, efa ela aho no nahazo an'ity recette ity ary tsy nahasarika ny saiko izany.
Fa ny andro hafa, ny rafozam-baviko dia niseho tamin'ny kitapo feno asparagus, sary an-tsaina, nanao asparagus natsatsika aho, asparagus efa zatra, lasopy asparagus (tena mahazatra eto Andalusia), saingy mbola nanana asparagus ihany aho.
Eny, nitady ilay fomba fahandro tao amin'ny bilaogy aho ary sahy nanao an'io nefa tsy nofinofy be (miaiky heloka aho).
Inona no tsy nampoiziko tamin'ity fomba fahandro ity, malefaka be sy matsiro tokoa izy, eny, matsiro.
Manome toky anao aho fa hamerina azy io mihoatra ny indray mandeha mandritra ny vanim-potoana. Ary ambonin'izany rehetra izany dia maivana !! Inona no mbola hangatahinao. Misaotra anao indray noho ny nanomezanay anay hankafy ny sakafo. Arahaba.
María, miaiky aho fa rehefa nahita an'ity recette ity voalohany, dia tsy nahasarika ny sain'ny olona firy, fa raha vao nanandrana aho dia faly aho, raha ny marina manana amboaram-boankazo roa asparagus ao anaty vata fampangatsiahana miandry ahy manomana crème.
Salama zazavavy tiako holazaina aminareo ny momba ny fanovana nataoko tao anaty recette, antony, misakafo aho ary na dia nisy crème maivana aza tao an-trano (11%) dia nanapa-kevitra ny hanafoana azy aho, nosoloiko izany ronono an-tsokosoko sy vovo-dronono vita amin'ny ronono (175 grama total) Tsy fantatro hoe hanao ahoana ny crème nefa nahafinaritra be ny fomba nahatsiarovako an'io fika nomenao ahy io satria tsy hitako ny ronono etona.
ka tsy misy na inona na inona raha misy te-hanala kaloria intsony, fantatrao ... misaotra anao indray amin'ny resanao
IZANY NO TSARA TOOOOODOOOO
Toa mahafinaritra ilay fomba fahandro, misakafo hariva any an-trano aho ary tiako ny manamboatra azy saingy manana fisalasalana kely aho. Ny ron-kena legioma dia vidiana ranon-javatra na pilina na tsy maintsy atao ary iray hafa ny asparagus handravaka dia manta, masaka ...
Matetika aho no manao ny ron-kena alohan'ny rano sy ny goba amin'ny legioma ary ny asparagus haingo dia vitsivitsy izay raisinao alohan'ny hitotoanao azy.
lambany dia hoy izy:
Nisy nanandrana nanova ny crème ho an'ny atody fotsy ve mba hahita inona?
Valiny amin'i CAPOTE
PETERA dia hoy izy:
Toy ny ... Mivoaka matsiro ilay recette !! Ny hevitry ny sautéing ny yolks asparagus hahafahana mametraka azy ireo avy eo amin'ny crème dia tsara. Niaraka tamina voanio tongolo gasy sy menaka oliva maina aho…. Mahazendana !!! Misaotra anao!!
Valiny tamin'i PETER
Misaotra betsaka anao Peter 😉
Loli dia hoy izy:
Resipeo tena tsara !! Momba ny crème vegan dia te-hanome hevitra aho. Mitandrema amin'ny crème legioma an'i Mercadona satria vita amin'ny menaka legioma, ao anatin'izany ny menaka palma, izay tsy fomba fahandro maivana intsony satria be kolesterola ny palma. Ampiasaiko ny amandy na ny crème soja na oatmeal izay amidin'izy ireo amin'ny mpivarotra raokandro ary mahasalama izany.
Valio i Loli
Salama, mila fantatro hoe ohatrinona ny lanja amin'ny "bongo roa", manana kitapo 750 gr aho. Ary tsy fantatro hoe firy ny asparagus miditra ao anaty andiany, satria mieritreritra aho fa hiankina amin'ny habeny izy ireo.
Manodidina ny 400 grama tsirairay ireo fehezam-boninkazo. Ka ho an'ny fomba fahandro mila 800 grama eo ho eo.
Hermi dia hoy izy:
Salama e! Androany aho dia nanao ny fomba fahandro ho an'ny taratasy ary tsy misy dikany izany! Tsy tsikaritro ny lanjan'ny asparagus satria satria nametraka fehezam-boninkazo 2 aho dia io no ananako.
Na izany na tsy izany, misy hevitra hitahiry ilay crème sa hanary azy?
Valiny tamin'i Hermi
Ranomasina amin'ny papillote